नेपाल खुला विश्वविद्यालयः अनलाइन कक्षा पनि स्थगित | Edupatra
नेपाल खुला विश्वविद्यालयः अनलाइन कक्षा पनि स्थगित
चैत्र २१, २०७६ इडियु-पत्र संवाददाता
सूचना प्रविधिका माध्यमहरू प्रयोग गरि 'distance learning' बाट उच्च शिक्षा कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयले पनि आफ्ना कक्षाहरु स्थगित गरेको छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. लेखनाथ शर्माले बेलुकी ६ देखि राती ९ बजेसम्म सञ्चालन गरिँदै आएको ‘रियल टाइम अनलाइन’ कक्षा विद्यार्थीहरूलाई समस्या हुने भएकाले स्थगन गर्नुपरेको बताए । अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गरिने यस्तो कक्षामा शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ ।
उनले भने, “एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा केही विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा पनि नहुने भए । त्यसैले केही समयका लागि स्थगन गरेका हौँ ।” अन्य कक्षाहरू भने सञ्चालन भइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा केही विद्यार्थीहरु इन्टरनेटको पहुँचमा पनि नहुने भए । त्यसैले केही समयका लागि स्थगन गरेका हौँ ।’
- प्रा.डा. लेखनाथ शर्मा, नेपाल खुला विश्वविद्यालय
एमफिल तहका विद्यार्थीहरूले बुझाएका प्रस्तावको प्रस्तुति र सेमिनार नियमित सञ्चालन भइरहेको छ । ती प्रस्तुति अनलाइनका माध्यमबाट गरिन्छ ।
माइक्रोसफ्ट कम्पनीसँग सहकार्यमा ‘रियल टाइम अनलाइन’ कक्षा हुँदै आएको छ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको उपस्थितिमा सम्पन्न हुने प्रत्यक्ष कक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, परीक्षा, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा मध्यावधि परीक्षा र आन्तरिक मूल्याकङ्नसम्बन्धी परीक्षा चैत ३० गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।
यस्तै स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । केही उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न बाँकी रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । उत्तरपुस्तिका विश्वविद्यालयमै थन्किएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले विश्वविद्यालयमा जान नदिएपछि केही उत्तरपुस्तिका थुनिएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बताउँछन् । विश्वविद्यालयमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने पद्धतिको विकास गरिएको थियो । तर विश्वविद्यालय बन्द छ । उपकुलपति डा. शर्माले भने, “उत्तरपुस्तिका परीक्षकहरूलाई गाडीले ल्याउने लैजाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गर्दैछौँ ।”
Multiple Choice Questions मात्र प्रयोग गरिएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा पनि सूचना-प्रविधिलाई अँगालेको यस विश्वविद्यालयले समयमा प्रकाशन गर्न सकेन । प्रवेश परिक्षामा आवेदकहरुलाई machine readable ढाँचामा उत्तर दिन लगाइएको थियो । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (IOM) लगायतका संस्थाले करिब ६ हजार विद्यार्थीका यसै ढाँचाका उत्तर पुस्तिका २४ घण्टाभित्र नै जाँच गरेर नतिजा प्रकाशन गरिसक्छन ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण भइसकेका विषयको नतिजा प्रकाशित गर्ने तयारी विश्वविद्यालयले गरेको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न बाँकी रहेका विषयको छिटो परीक्षण गरी नतिजा सार्वजनिक गरिने भनाइ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको छ ।
Tags: नेपाल खुला विश्वविद्यालय अनलाईन कक्षा